Iqondo lokushisa eliphezulu i-ceram ibe lube lube lube lube lubethelele i-pigments ebomvu ye-ceramics
Umgangatho wokugqibela we-ceramic yodongwe lodongwe Assay Deay Deay ngegolide xa kuthelekiswa neemveliso ezifanayo kwintengiso, umgangatho obalaseleyo ngokusebenza, umgangatho, inkangeleko, kwaye inandipha igama elihle emarikeni. I-Xingtailong ishwankathela isiphene seemveliso zangaphambili kwaye siphucule ngokuqhubekekayo. Inkcazo yemigangatho ephezulu yomgangatho we-ceramic cray dey asy deay ovelelayo kwi-spelation yegolide inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zakho.
I-Assay Assay ye-Assay ineempawu eziphezulu kakhulu ekuchanyoni okuqhelekileyo ukunqanda phantsi kweemeko zexabiso lomlilo. Iinqaba zethu zisetyenziswa kwiilebhu yonke kwindawo yentengiso yamanye amazwe. Sineentlobo ngeentlobo zemilo kunye nobukhulu obufumanekayo ukuze zinikezelwe kwiinkcazo ezifunekayo.
Ukubethelwa kwethu iinqaba zinika ubomi obude, ukukhawuleza ukunyibilika, isantya esihamba rhoqo, kunye nokungaxhathisi okhethekileyo kutshintsho olunogonyamelo.
Imveliso ineempawu ze-slongwation elungileyo. Ifayibha yayo iphathwe nge-elastichizer enokuphucula amandla okondlala phakathi kwentsimi.
2. Yintoni ixesha lokuhanjiswa?
3.Can ndifumana iisampulu kumzi-mveliso wakho?
I-1.1price: Iimveliso zethu zithelekisa kakuhle nabanye abarhwebi.
Ukudlula: Sidlulile i-IS0 9001: 2005. Imigangatho, izinzile, inokuthenjwa
3.I-3istory: Sidibene ne-r&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa ngokupheleleyo,
4.2Group, Yiba neqela lethu ukuba lifunde, uyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa.
Liling Xing Tai Long Special yodongwe Co., Ltd. lasekwa ngo-1997, ngokukodwa uphando kunye nophuhliso, mveliso umlilo kulingwa ngokuyinyibilikisa kunye cupel. Iimveliso zisetyenziselwa uhlalutyo lwesinyithi oluxabisekileyo, ukuvavanywa kwelebhu yenyama, ukukhathazeka kwezimbiwa, kunye nokunyanzeleka kwegolide. Izinto ezimbi ze-Assay zeShifys ziyiFireclay ezixutywe nezinye izinto zokwenza izinto, banokujamelana nobushushu ukuya kwi-1300 ℃. Banokuchasana ngokugqwesileyo ngokuchasene nohlaselo lwe-flux, ukhukuliseko, ukuqhekeza, kunye nothuso lwe-thermal. Njengomvelisi onamandla ovelisileyo we-assay ocekeceke ngeCupel, sinama-7000 isikwere sokwakha isikwere esitsha somzi-mveliso kunye nomgca ozenzekelayo wemveliso. Inkampani ihlala inamathela ekwenzeni umgangatho wokusinda, ubuchule, kunye nophuhliso, ukuthembeka kophawu, ukukhusela kunye nokucinga kunye nenjongo yenkonzo yasemva kwentengiso njengenjongo. Kwiminyaka edlulileyo, iimveliso zethu zithengiswa kakuhle kwilizwe lonke kwaye zathumela eJamani, i-United States, iBrazil, iRussia, i-Mexico ... "Umgangatho ophezulu, ixabiso elikhethekileyo" lulawulo lwethu. Silindele ukubambisana nabantu basekhaya nabangaphandle, uphuhliso oluqhelekileyo! Wamkelekile ukutyelela kwaye uphande kwinkampani yethu.
Sio2 + Al23o3
L.O.i (ilahleko kwi-ignition)
Ixesha elide, linokusetyenziswa amaxesha amaninzi
Ukomelela okuphezulu koomatshini okwenzelwe ukumelana nobunzima obuqatha
Ifomula ekhethekileyo, ukunyanga kunye nokucinezela inkqubo
Inokumelana neemeko ze-assoscing ezibonakalayo
Ingakwazi ukuphindaphinda i-shorks ephindaphindwayo ukusuka kwi-1300 degree degree i-clius kubushushu begumbi
Uvavanyo lwezinto ezibonakalayo
Sinemveliso epheleleyo yemveliso kunye nezixhobo zokuvavanya, kubandakanya umgca ozenzekelayo
Sineqela lethu ukuba sifunde, uyilo, ukuvelisa kunye nokuthengisa
Sidlule i-IS0 9001: 2005. Imigangatho, izinzile, inokuthenjwa
Iimveliso zethu zithelekisa kakuhle nabanye abarhwebi.
Sidityaniswe ne-r&D, ukuvelisa kunye nokuthengisa ngokupheleleyo
Nomgangatho kakhulu, inkonzo firt-class, neshishini
I-pigment yethu ye-ceramic ibulele i-ceram ithe ibethelela ubomi obude, ngokukhawuleza, isantya esihamba rhoqo kunye nokungaxhathisi okhethekileyo kwiqondo lobushushu lobushushu.Senza kwaye sibonelele ngomsebenzi ophezulu wokusebenza owenze ceram. Umxube wesayensi webatch yezinto ezibonakalayo, ukucinezela ngokufanelekileyo ii-DYES, kunye namaqondo obushushu afanelekileyo atshisiweyo, anike amanqanaba aphezulu okuqina kothuko olunzima. Izinto eziphezulu eziphezulu ezisetyenziselwa ukwenziwa kwayo, zidityaniswa nemveliso elawulwa ngononophelo, iqinisekisa ukutyeba ngaphezulu kwembetheko kwinqaba nganye, ngaloo ndlela ibonelela ngexabiso elingakumbi.Esona sicelo sinemigangatho ebomvu ye-ceraramics, ubukhulu obuqhelekileyo
kulingwa umlilo Iziko ngodongwe Mineral igolide
iintlobo Lunikezelo crucibles kulingwa lomlilo, imodeli kwesiqhelo inqanaba kwamanye amazwe kunokuba ukukhetha, yenza esamkelekileyo.Umlilo kulingwa ukusetyenziswa ngokuyinyibilikisa esingundoqo Precious Metal Analysis, Laboratory Mining, Laboratory Testing, Mineral, akukulinga oko, akukulinga mlilo, Gold akukulinga